Madaxweynaha JSL Oo Ka Qayb Galay Shirweynaha Garabka Dhalinyarada Xisbiga Kulmiye + Sawiro – Tusmoonline.com
Madaxweynaha JSL Oo Ka Qayb Galay Shirweynaha Garabka Dhalinyarada Xisbiga Kulmiye + Sawiro
Wararka	December 18, 2016	143	Like
Shirkaas oo socon doona laba maalmood ayey isugu yimaadeen dhalinyarada heer qaran ee gobolada dalka Somaliland, waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee Xisbiga Kulmiye, Cabdinajax Siyaad Aw Cabdi, Wasiirka Wasaaradda Madaxtooyada Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi, Gudoomiyaha ahna murashaxa Xisbiga Kulmiye Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamed Silaanyo.
Waxa hubaal ah, in Dhallinyarada Dalka ee aad ka midka tihiin, ay yihiin labeenta, laxaadka, iyo laf-dhabarta uu ku faanayo qarankan yagleesha ah, ee loo soo daadiyey dhiigga iyo dhididka faraha badan. Ummad aan da’yar lahayn, waxay ka dhigan-tahay beer aan baad iyo biyo toonna lahayn.
Murti-soomaaliyeed ayaa tidhaahda
“Ninka iyo Jiilaalku way is-hayaan, Waxaase Adkaada Hadba Kii ay Haweenaydu Raacdo”
Waxaa hubaal ah, in aynu xaqiijinay hadafkii iyo himilooyinkii Xisbiga Kulmiye.
Adeerayaal iyo Awoowayaal,
Waxaan idin leeyahay, taageeradiinii Xisbiga Kulmiye, ma noqon tacab khasaar, ee waa lagu tanaaday. Waxaan idin leeyahay, taas baa guul idiin ah, dhammaanteena guul inoo ah.
Xafiiska Afhayeenka iyo Warbaahinta Madaxtooyadda JSL